MAQAAL: 3 Arrimood Oo Maamulka Real Ku Qasbeysa In Aysan Ceyrin Zidane Oo La Shaaciyay » Laacib.so | Horyaalka Ciyaaraha Dalka iyo Caalamka
Home/ Falanqeynta/MAQAAL: 3 Arrimood Oo Maamulka Real Ku Qasbeysa In Aysan Ceyrin Zidane Oo La Shaaciyay
Tababare Zinedine Zidane, waxaa leysla dhexmarayaa sheeko ku aadan in la ceyrin doono hadii uu xagaagan ku guuleysan waayo tartanka Champions League, kaasoo ah koobka kaliya oo ay hada rajo fiican ka leeyihiin.
Horyaalka La Liga, wuxuu umuuqdaa mid ay lasii galbatay Barcelona, sababtoo ah inay hada Real Madrid, ay fadhiso kaalinta saddexaad islamarkaana ay leedahay 57 dhibcood, halka Barcelona, oo koowaad ah ay 72 dhibcood.
Los Blancos, ayaa waxay hada ka joogtaa wareega Sideed dhamaadka Champions League, waxayna kasoo talaabsadeen PSG, kuwasoo ah kusoo dar-dareen labada lugood 5-2, taasoo ka dhigan tahay si awood ah ay kusoo baxday.
Hadaba, hoos ayaan idin kugu soo gudbin doonaa saddexda arrimood, kuwaasoo maamulka Real, ku qasbaya in aysan fasaxin ama aysan ceyrin Zidane.
Waxyaabaha aas-aaska ah guulaha Zidane, ayaa waxaa kamid ah inuu kalsooni badan uu siiyo ciyaartoydiisa, isagoona qaada mar walba talaabo taasoo guul ama darajo fiican gaarsiineysa kooxdiisa caasimada ka dhisan.
Tusaale ahaan, dooda ugu badan ee hada taagan waxay tahay in sheekada ku saabsan Isco iyo Bale, laakiin Zidane wuxuu mar walba yahay mid fursado siiya xidigaan, waxaana intaas udheer inuu ciyaartoydiisa uusan dhaleeceyn.
Inkastoo, Pep Guardiola iyo Jose Mourinho, ayaa waxay yihiin macalimiinta kaliya ee kubada cagta ugu wanagasan dhanka farsamada, hadana Zidane, wuxuu soo bandhigay tayadiisa macalinimo kulankii PSG ay CL uga reebeen.
Markii tababaraha PSG ee Unia Emery uu falsafada la fahmay Zidane, waqtigaasoo uu qeybta labaad ee keenay Bale, ayuu macalinka Los Blancos, uu garoonka keenay Asensio iyo Vasquez, kuwaasoo ciyaarta wax badan ka bedalay.
“Ma ahan Xiisoole”
Shaqadiisa tababarka kooxda waa mid maalin walba ciyaartoyda la hadla, wuxuuna mar walba la hadlaa xidigaha Madrid, isagoona gobaabiya, una sheegay in kooxdu ay iyaga ubaahan tahay, islamarkaana ay guul keeni karaan.
Tani oo ah wax ay la dhacsan yihiin maamulka Real, ayaa Zidane wuxuu yahay mid aanan ka caajisin inuu sameeyo, halka macalimiintii hore ee kooxdaan soo martay aysan si joogta ah usameyn karin arrintaan.